Naannoo Axaayeetti Tasgabiin Bu’eera.: Angawaa
Onkoloolessa 07, 2019
Dheengaddaa fi kaleessa naannoo Amaaraa godinaa Shawaa Kaabaa aanaa Efraataa fi Gidim naannoo Haxxaayyeetti akkasumas kan olla asana jiru – godinaa addaa hawaasa Oromoo keessatti hookkarri uumamee ture har’a qabbanaa’ee jira – jechuun humnoonni naga-eegumsaa fi jiraattonni dubbatanii jiran.
Itti-gaafatamaan bulchiisaa fi nageenyaa aanichaa kaleessa ibsa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf kennaniin, “kanneen dhukaasa banan hidhatoota meeshaalee akka Matarayeessii fi Isnaayipperii qabatan” jechuun dubbatanii turan.
Kan VOAf yaada isaanii kennan – jiraataan Kaarraa Qoree tokko “ammallee haalawwan akka wal muddinsi sun hammaatu gohan waan mul’ataniif humni naga-eegumsaa amansiisaan naannoo sana qubsisamuu qaba” jedhan.
Achuma aanaa sana keessa – naannoo Maajeteettis har’a ganama sagaleen dhukaasaa dhaga’ame – jedhama.
Gabaasaa Mesfin Arraagee Caqasaa.